5 Kushambadzira Budget Zvikanganiso Zvokudzivisa | Martech Zone
5 Kushambadzira Budget Zvikanganiso Zvokudzivisa
Muvhuro, Nyamavhuvhu 14, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Imwe yeakagovaniswa infographics atakaita aitaura SaaS Kushambadzira Mabhajeti uye chaizvo chaizvo muzana muzana yemari inowanikwa mamwe makambani aishandisa kuchengetedza uye kuwana mugove wemusika. Nekuisa yako kushambadzira bhajeti kune yakazara muzana yemari, inopa yako yekutengesa timu kuti uwedzere kuwedzera kudiwa sekutengesa timu yako inoda izvozvo. Flat bhajeti inogadzira zvakaperera mhedzisiro ... kunze kwekunge iwe wawana chengetedzo kumwe kunhu mumusanganiswa.
Iyi infographic kubva kuMDG Kushambadzira, 5 Makuru Ekushambadzira Budget Zvikanganiso zvekudzivisa, inoratidzira nzvimbo shanu uko kukanganisa mukutonga kunotungamira mukusaita basa kunoshandisa pamwe nekuisa pamberi yako nguva, simba uye bhajeti paunenge uchiita marongero ekushambadzira.
Iwo Ekushambadzira Budget Zvikanganiso:
Kutanga neBad Data - Makambani anotenda kuti 32% yedata ravo haina kururama, paavhareji. Iyi data isina kuvimbika, iyo inotangira pane kusanzwisisika analytics madhibhodhi kumahombekombe makuru mumadhatabhesi evatengi, anobatana akananga kune yakashata bhajeti sarudzo.
Kukundikana Kubatana Nekutengesa - 50% yevatengesi havagutsikane nesimba ravo rekushambadzira. Yese bhajeti rekushambadzira rinofanirwa kuvandudzwa pamwe chete nemamwe madhipatimendi, kunyanya kutengesa. Zvakare, yega yega yekushandisa inofanirwa kuve yakabatana zvakananga kune inotarisirwa bhizinesi mhedzisiro.
Kudyara pasi mune Proven Workhorses - 52% yevatengesi vanoti email ndeimwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzavanoshandisa asi vashambadzi vanowanzo pusha bhajeti kune mamwe marongero kunyangwe kushanda kweemail. Izvo zvakakosha kuti urambe uchiwedzera mari mune izvo zviri kutoshanda.
Kusazvidza Sipidhi Yekuchinja - Mu2017, dhijitari inofungidzirwa kuti iverenge makumi matatu neshanu muzana emari yeUS kushambadzira, uye huwandu hwetekinoroji nyowani dziri kubuda dzinogona kusimudzira kusimuka nekukurumidza kwakapihwa nedigital mumakore anotevera.
Kuongorora Zvishoma, Zvakawandisa Kazhinji - 70% emakambani haayedze mishandirapamwe yekutengesa nevatengi nguva dzose. Vatengesi vanofanirwa kuyedza nekukurumidza uye kurerutsa pakati pevashambadziro masvikiro, chiteshi, uye mazano vachishandisa agile kushambadzira zano.
Tags: yakaipa databhajetichangingDataEmail MarketingkuongororaMarketingkushambadzira bhajetiitsvaKugonesa Kugonesayokuedzwa
Kugadziridza uye Kupindura kune Mhinduro Dzinotyaira Zvemukati Ekushambadzira Mhedzisiro
Chii chinonzi Chibvumirano Management System? Vakakurumbira Zvakadii?
Aug 14, 2017 na10: 02 PM
Ini zvino ndave COO yemuguta incubator muno muIndy, iyo Grindery. Uye chinhu chimwe chandisingakwanise kuita sekutyaira kumba zvakakwana kukosha kwedata. Isu tinorarama munyika ine yakawanda data, analytics, uye kugona kunyatso shandisa iro ruzivo kuti uite SMARTER sarudzo. Asi, ini ndine hurukuro dzinotanga ne, ".. ndinonzwa se .." kana "… zvinoita senge kwandiri ...". Ini ndinobvunza, ndeupi rudzi rwemuenzaniso wawakatora? Iyo data inoratidza chii?
Iyi inotonhorera infographic, uye ndinokutendai nehungwaru hwako. Zvino, ndaenda kune webinar pane mamwe maemail saas